Ukucoca iBhodi yokuCoca - Ukucoca Iitips
Ukucoca iBhodi yokuCoca
Izicoci zebhodi yokucoca ezomileyo ezenziwe ekhaya azenzelwanga ootitshala nabazali abangabhataliyo. Malunga naye nabani na ojonge ukugcina imali kwizinto zokucoca unokufumana izisombululo eziza kubuyisela iibhodi zokucima ezomileyo ekukhanyeni kwazo kwasekuqaleni.
Ukucoca iiBhodi zokuCoca ngokuCoca
Iibhodi zokucima ezomileyo zithandwa kakhulu ezikolweni, eziofisini nasemakhaya. Iibhodi ezimhlophe ezifanelekileyo zezona zilungileyo endaweni yeebhodi zebhodi kunye neebhodi zeebhulethini. Ngaphezu, kulula kakhulu ukuba ukucoca kunye nokugcina. Zininzi iimveliso zokucoca ezorhwebo ezifumanekayo ukuze zisetyenziswe kwiibhodi ezomileyo. Uninzi luqulathe iblitshi okanye utywala, ecima i-inki namanye amabala. Nangona kunjalo, la magama izisombululo zokucoca uphawu ezinokubiza kakhulu ukuthenga kwaye zinikwe ukuba zisebenzisa izithako zokucoca ezisemgangathweni uninzi lwabantu olunazo emakhayeni abo, zihlala zingabhatali ukuthenga izixhobo zokucoca iibhodi ezomileyo.
zithetha ntoni iziporho kwi-snapchat
Izithako zezinto zokuhlamba iimpahla
Ukucoca iDekk kunye nokugcina igalari
Ukuzikhethela kweBhodi yokuCoca ukuCoca
Abanini bebhodi yokucima eyomileyo bayazi ukuba ayithathi lukhulu ukugcina iibhodi ezimhlophe ezixabisekileyo. Okwangoku, ukuba usebenza ixesha elide kwibhodi efanayo eyomileyo, kuya kusiba nzima ngakumbi ukucima amanqaku amakhulu. Ukuze ulondoloze uhlahlo lwabiwo-mali, qwa lasela ukwenza ngokwakho ukucoca ibhodi yokucoca eyomileyo usebenzisa izinto ezilandelayo zemihla ngemihla:
Gcwalisa nje irag ecocekileyo okanye iitawuli zamaphepha ngokurabha utywala kwaye usule amabala e-inki kwibhodi yakho yokucima eyomileyo. Ukuba une-inki enenkani, beka utywala kwibhotile yokutshiza kwaye uyithambise ngokuthe ngqo kumakishi ngaphambi kokuba usule owomileyo.
Ukuba awunayo i-isopropyl alcohol ngasesandleni sakho, ke jonga ukusebenzisa isicoci sesandla, esikwaquka notywala. Ungafaka isixa esincinci sesicoci esisesandleni kwisicimi esiza nebhodi yakho emhlophe okanye ungafaka idabs ezimbalwa kwilaphu elicocekileyo kwaye ucime nayiphi na inki engenakucinywa irabha eyomileyo.
Ukuba ukude ngenene, fikelela kwizisuli ze-antibacterial. Amanzi omanzi okanye ezinye izisuli ezenziwe ngohlobo oluqhelekileyo zinotywala ezizakususa i-inki kunye neebhodi zokucima ezomileyo. Susa ngokulula izisuli ezivela kwisitya kwaye uzisebenzise ngobunono kuwo wonke umphezulu webhodi emhlophe.
Iviniga yinto ebalulekileyo yasekhaya eyenza izinto ezininzi njengezinye. Esinye sezona zixhobo ezincinci zokucoca iibhodi zokucima ezomileyo zifuna iviniga kunye namanzi. Hlanganisa iindawo ezilinganayo kulwelo olubini kwaye usebenzise isisombululo kwibhodi emhlophe. Ukufumana amabala anzima, vumela isicoci esenziwe ekhaya ukuba sihlale imizuzu embalwa ngaphambi kokuba usule ngelaphu elicocekileyo.
Isicoci seglasi esiqhelekileyo yenye imveliso ebonakalayo yokugcina iibhodi zokucima ezomileyo. Umgangatho ococekileyo weglasi wendlu uqukethe utywala kunye nezinye izithako ezikhawuleza zichithe ukungcola, uthuli kunye nentsalela yeinki. Nangona kunjalo, ezinye izinto zokucoca iglasi zinokuba yirhabaxa kwindawo emhlophe emhlophe, kungoko ke kungumbono olungileyo ukusebenzisa ilaphu elifumileyo nelithambileyo xa usula nasiphi na isicoci seglasi esingaphezulu.
Ukutshizwa kweenwele yenye yezinto eziqhelekileyo zokucoca ibhodi emhlophe. Utywala obuqulethwe kwisitshizi bunceda ukuphakamisa ukungcola ne-inki. Ukusebenzisa, tshiza ngokufafaza iinwele kwibhodi yokucima eyomileyo, kwaye uyivumele ukuba ihlale malunga nemizuzu emibini ngaphambi kokuba uyisule icocekile ngelaphu elifumileyo. Icebo kukungayivumeli ukuba ihlale ixesha elide okanye uza kushiyeka unengxaki yokuncamathela.
Izilumkiso kunye nokuQapha
Ngelixa ezi zinto ziza kucoca ibhodi yakho emhlophe, kukho iingcali ezikulumkisa ukuba usebenzise inkathalo xa usebenzisa izinto zokucoca ezenziwe ngabantu kwiibhodi ezomileyo.
Umonakalo onokubakho kuTywala
Njengokuba, Magnatag Inkqubo yebhodi emhlophe ithi utywala bunokuba yingozi kwiibhodi ezimhlophe. Kungenxa yokuba inokuwohloka umphezulu webhodi, isuse umaleko wokuthambisa. Oku kuyakwenza ukuba iibhodi ezimhlophe ziphulukane namandla okusulwa acoceke.
Zonke iiNjongo zokuCoca kunye neeArasras zingashenxisa iiwaranti
Ukongeza, ezinye iinkampani zithanda Quartet , Qaphela ukuba zonke izinto ezicocekileyo njengokucoca iglasi zinokutshabalalisa umphezulu webhodi. Inokude iwenze ungabinanto iwaranti yamanye amabhodi amhlophe, njenge Inkqubo kaSmith . Ukongeza, iinkampani ezininzi ziqaphela ukusetyenziswa kwefayile ye- Isicoci esirhabaxa ayiyi kuyenza iwaranti.
Ke ngoko, ngaphambi kokusebenzisa nasiphi na isicoci esenziwe ekhaya ebhodini, jonga ulwazi lwakho lwewaranti kunye neemveliso ezicocekileyo zokucoca ukuqinisekisa ukuba into oyisebenzisayo ayinakulimaza ibhodi yakho ekugqibeleni.
Ungalifumana njani ivumba elibi kwifriji
Ukunciphisa ixesha elichithwe ukucoca iibhodi ezomileyo, cinga ezi ngcebiso ziluncedo ziya kunciphisa ukonakala kunye nebhodi emhlophe oyithandayo:
Cima rhoqo : Musa ukulinda iintsuku ngaphambi kokuba ususe isixa esikhulu sokubhala. Endaweni yoko, cima amanqaku ngokukhawuleza xa ugqibile ngawo. Kwakhona, xa ucima ibhodi emhlophe, sukucoca indawo ezinophawu. Endaweni yoko, coca yonke ibhodi kakuhle emva kokusetyenziswa ngakunye.
Isepha namanzi Kunokuba ulinde de ibhodi yakho yokucima eyomileyo igcwele ukumakisha okuseleyo, cinga ukuyicoca ngesepha encinci namanzi qho ngeveki. Dipha isiponji kumxube wamanzi anesepha kwaye ukhuhle ngobunono ibhodi. Emva koko, yome ngetawuli ethambileyo.
Ukulungiswa ngokukhawuleza : Amashiti asomileyo asetyenzisiweyo, ipolishi yezihlangu emhlophe, isikhuphethi seenzipho, kunye nentlama yamazinyo ziimveliso eziqhelekileyo ezisetyenziswa ngabantu abathile ukucima amabala amhlophe. Banokuthi okanye bangasebenzi ebhodini yakho. Ukuba uzama ukuzisebenzisa, qiniseka ukuba uqhuba uvavanyo kwinxalenye encinci yebhodi ukuze ubone ukuba iyangqinelana nokwaleka kwebhodi.
Ungaze usebenzise iingqekembe okanye ezinye izinto ezilukhuni, ezibukhali ukukrwela amanqaku aneenkani kwibhodi yokucima eyomileyo. Ukwenza njalo kuya konakalisa umphezulu webhodi emhlophe kwaye kunciphise indawo yakho yokubhala.
Umtshato Mishaps Celiac Disease Malunga Imibuzo Iitattoos Izilayidi Enye Indlela Izinwele
ngowuphi umnwe ofaka isithembiso
Ngaba kufuneka ubuyisele ukhuseleko lwentlalo xa umntu eswelekile
indlela yokuphendula kwi-imeyile yodliwanondlebe
Ungapheka ixesha elingakanani nge-1 lb inyama yenyama ngo-375
ikhontrakthi yomntwana omdala ohlala ekhaya
imvumi yomatshini wokuthunga inombolo ye-serial g